Haweenay Gudoomiye waaxeed Ka aheed Xamar Jajab Oo xalay lagu Dilay Degmadaasi – STAR FM SOMALIA
Kooxo hubaysan ayaa xalay Degmada Xamar jajab ee Gobolka Banaadir waxa ay ku dileen haweenay Guddoomiye waaxeed ka aheyd Degmada Xamar Jajab.
Ragga hubeysan ayaa beegsaday haweenayda, waxaana rasaas ay la dhaceen ay sababtay inuu dhaawac culus soo gaaro haweenaydaasi, iyadoo ugu dambeyn u geeriyootay dhaawicii cuslaa ee soo gaaray.
Siciido Sheekh Mursal, ayaa lagu magacaabi jiray haweenayda Guddoomiye Waaxeedka ka aheyd Degmada Xamar jajab ee xalay fiidkii ragga hubaysan ay rasaasta la dhaceen, kadibna dhaawicii soo gaadhay Isbitaalka ugu geeriyootay.
Raggii hubaysnaa ayaa ka baxsaday goobta ay ku beegsadeen haweenaydaasi, iyadoo aysan suuragelin ciidamada ammaanka Degmada Xamar jajab inay soo qabtaan raggii ka dambeeyay dilka haweenaydaasi.
Maamulka Degmada Xamar jajab weli kama aysan hadlin dilkaan loo geystay Haweenaydaan Guddoomiye Waaxeedka ka aheyd Degmada Xamar jajab ee xalay ifka la dhaafiyay.